Manandratra ireo mpanakanto afrikanina : handeha eto Madagasikara ny “Coke Studio” | NewsMada
Manandratra ireo mpanakanto afrikanina : handeha eto Madagasikara ny “Coke Studio”
Efa nandeha tamin’ny fahitalavitra Record, ny asabotsy te,o ny andiahy voalohany amin’ny “Coke Studio”. Hifandimby ao ireo mpanakanto afrikanina malaza ka anisan’ireny i Wawa, solontenan’i Madagasikara.
Tetikasa mahakasika ny mozika, natao hanambarana sy hanandratana ireo mpanakanto manan-talenta aty Afrika ny “Coke Studio”. Manome sehatra ireo mpanakanto ahafahany mivelatra eo amin’ny tsenan’ny mozika iraisam-pirenena izany. Nanambatra firenena afrikanina 11 ny “Coke Studio” ka ansian’izany i Madagasikara, tamin’ny alalan’i Wawa. Ity mpanakanto zanak’i Nosy Be ity no nitondra ny mozika malagasy tao anatin’ny hetsika, izay naka endrika “télé réalité”, izay mandeha aty amintsika koa nanomboka ny asabotsy teo.
Nialoha izany, nisy ny lanonana fampahafantarana ny “Coke Studio”, notontosaina tetsy amin’ny Ibis Ankorondrano, ny alin’ny zoma lasa teo. Fotoana nizarana ny mombamomba ny hetsika kanefa nizaran’ireo mpanakanto malagasy toa an’i Deenyz sy i Shyn ny talentany ihany koa. Lanonana niavaka sy niravaka ny lokon’ny Coca-Cola, nanome ilay endrika maha iraisam-pirenena azy, izany. Nasaina manokana ireo mpanakanto sy ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto, ary ireo mpiasan’ny haino manan-jery isan-karazany, nandritra ny lanonana.
Mpanakanto ambasadaoron’ny orinasa Telma i Wawa ka rariny ny fiarah-miasa teo amin’ity orinasan-tserasera ity sy ny “Coke Studio”. Noho izany, teraka tamin’izany ny “Coca-Cola promotion”, izay natao hanomezana loka ny mpanjifa. Misy “code” ahazoana loka avy amin’ny Telma avokoa anatin’ny kapisilin’ny tavoahangy Coca-Cola 33 cl. Mety ho “sms” na antso maimaimpoana izany. Mety ho finday avo lenta na “clé Wifi” ihany koa.